Jidka joogto ah in la banneeyo Cache ku iPhone
Marka aad bogga internet-ka ee aad iPhone, macluumaadka la ururiyo oo la kaydiyaa by browser ku saabsan dhamaan goobaha aad soo booqan si ay u soo noolee habka of loading sida aad ku soo celiyaan nidaamka. In kastoo kaydinta macluumaadka aad khasnado roon tahay in jidkaas, waxay qaadataa ilaa badan oo meel bilaash ah ee aad iPhone.
Si kastaba ha ahaatee, nasiib wanaag daalacashada in aad iPhone ogolaan karaa xaadhista khasnado oo ay ka dhigi boos lacag la'aan ah mar kale idiin. Halkan waxa ku jira talaabooyin muujinaya sida loo kala cadeeyo khasnado in 3 daalacashada kala duwan ee aad iPhone aad.
Fur browser iyo tubbada badhanka chrome Menu la arko ee geeska sare si xaq.
Tuubada Settings oo loo arki karaa haddii aad hoos ugu rogto menu.
Tubada ikhtiyaarka of Privacy qaybta 'Advanced'.
Tubada ikhtiyaarka ugu cad cad Cache laga heli karaa qaybta Tirtir xogta.
Ku celi oo mar kale ka jaftaa Clear Cache si loo xaqiijiyo iyo tirtirto Cache.
Fur browser iyo garaac icon Goobta arkay hoose ee shaashadda ah.
Tubada doorasho Settings ka shaashadda soo socda oo furi menu ee qaybta goobaha.
Tubada ku Privacy qaybta arkay sare ee goobaha guud Options.
Tubada badhanka Clear Cache ah oo aad awoodi kartid in aad u hesho marka aad hoos u rogto si ay u tirtirto khasnado noqon.
Tubada on ikhtiyaarka ah Settings arkay shaashadda Home ah.
Hoos si hoose ilaa aad ka aragto Safari oo ka jaftaa ku yaal. Waxaa soo celin doonaa fursadaha menu.
Tubada on Kukiyada oo cad iyo Data taas oo ay tahay in aad hoos ugu rogto yara. Sida aad ku sawirnaa, sanduuq ama suuqa kala arbushin doonaa halka aad u baahan tahay inay hesho on Kukiyada oo cad iyo Data si loo xaqiijiyo. Marxaladani waxay kala cadeeyo doonaa khasnado.
Sida loo Cad Cache ku iPhone si buuxda oo joogto ah
Marka laga reebo nadiifinta khasnado aad iPhone habka caadiga ah, waxaa ka soo baxay wax ku ool ah, oo kala ah, Wondershare SafeEraser, kaas oo kaa caawinaysaa in aad in ay nadiifiso khasnado si joogto ah, ku dheehan ku daray ammaanka ka badan waqti isku mid ah.
Waa maxay SafeEraser Wondershare?
Wondershare SafeEraser waa wax soo saarka si gaara loogu talagalay si ay u ilaaliyaan macluumaadka shakhsi ahaaneed ee dadka isticmaala ee telefoonada gacanta. The sirta ah in aan u isticmaalno lagoogu xisaabaha kala duwan sida xisaabaha bangiga, email, baraha bulshada iyo xisaab kale waxay yihiin xitaa aan iyaga tirtirto.
Wondershare SafeEraser damaanad qaadaya ammaanka iyadoo la tirtirayo dhammaan xogta si buuxda oo joogto ah. Waxay hubisaa ammaanka macluumaadkaaga ay si fiican nadiifinta dhirta taariikhda, maylka adag iyo files.
Wondershare SafeEraser uu leeyahay muuqaalada tayo aad u sarreeya oo waa sida hoos ku xusan.
1-Guji Nadiifinta: Fur badan oo boos iyadoo hal click.
Photo hawadda: cadaadi photos in ay oggolaadaan in meel bannaan oo dheeraad ah oo lagu kaydiyo.
Masixi Xogta Gaarka ah: masixi xogta gaarka kuu ah si joogto ah.
Masixi tirtiray Files: tirtirto dhammaan faylasha ururtay in folder qashinka ah qalab aad si joogto ah.
Masixi All Data: tirtirto dhammaan xogta shakhsiga si buuxda oo aan dib u soo celinta iyo soo afjarno in goobaha warshadda.
Sida loo isticmaalo Wondershare SafeEraser in ay nadiifiso khasnado on iPhone si joogto ah ama gebi ahaan
Tallaabooyinka hoose si aad u tusi doonaa sida loo kala cadeeyo khasnado gebi ahaanba iyadoo la kaashanayo Wondershare SafeEraser. Waxaan isticmaali doonaa doorasho ama feature ee masixi Private Data sababtan aawadeed sida ay diirada u saaran dhammaan macluumaadka sida in la oran karo waa sida gaarka ah sida Author taariikhda, khasnado iwm
Download iyo rakibi codsiga - Wondershare SafeEraser on your computer adigoo gujinaya halkan .
Ka dib markii ay ku rakibidda Wondershare SafeEraser aad PC / Mac, ordo barnaamijka.
Isticmaalka cable USB, xiriiriyaan qalab macruufka la your computer.
The app uu furmo suuqa ugu weyn si toos ah arbushin doonaa sida qalab aad la aqoonsan yahay.
Masixi Data Private
Riix masixi Private Data arkay in uu xaq u xirmin suuqa hoose.
Barnaamijka ayaa iskaan doonaa oo falanqeeyaan xogta ku jira qalabka.
Xogta gaarka ee qaybaha la soo daabici doonaa mar qalab la marsiiyey. Dooro nooca xogta aad rabto in aad masixi oo guji masixi Hadda in ay ka saarto xogta gaarka ah.
Degdeg ah ayaa la soo bandhigi doonaa si ku qor erayga 'tirtirto' ka hor la tirtiro xogta aad si joogto ah. Fiiri sawirka sida hoos ku siiyo.
Waxaa aad u tagto, in aad tirtiray khasnado oo dhan aad iPhone fudayd iyo guud ahaan ballanqaad ah in macluumaadka gaarka ah ay tahay mid amaan iyo gacmaha qof iyo sidoo kale qaadasho meel kasta oo bannaan oo dheeraad ah in aad iPhone.
Clear Cache ku iPhone Video Tutorial
> Resource > masixi > Sida loo Cad Cache ku iPhone 4 / 4s / 5 / 5s / 6/6 Plus